တစ်ရက်ထဲမှာပဲ မိဘမဲ့ ကလေးငယ်လေး (၃) ယောက်ကို မွေးစားခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Youth Bar
တစ်ရက်ထဲမှာပဲ မိဘမဲ့ ကလေးငယ်လေး (၃) ယောက်ကို မွေးစားခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
မင်းသမီးချောလေး ခိုင်နှင်းဝေကတော့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူတူ အများအကျိုးအတွက် ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါနစ်ပြီး လုပ်ဆောင်လာတာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတအသင်းနဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာကို တည်ထောင်ဦးစီးနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေက အလုပ်တွေများစွာကို ဦးစီးလုပ်ကိုင်နေရသူပီပီ ဝန်တွေများစွာကို ထမ်းဆောင်ထားရသူတစ်ယောက် ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ ကလေးလေးတွေကို ကြင်နာတဲ့နှလုံးသားအပြည့်နဲ့ မွေးစားကယ်ဆယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခု လည်း တစ်ရက်ထဲမှာပဲ ကလေးငယ်လေး (၃) ယောက်ကို မွေးစားစောင့်ရှောက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းခုလိုပုံလေးတွေနဲ့တကွဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။” ဒီနေ့ တရက်ထဲ သားသမီး (၃) ယောက် မွေးစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်…..သားလေး (၂) ယောက် နဲ့ သမီးလေး (၁) ယောက်ပါ…လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး ဆိုးသည် ကောင်းသည် မရွေးပဲ လူ့အသက် တချောင်းကို တန်ဘိုးထား၍ ကယ်တင်ခြင်းမှာ ကျမ ခံယူချက်ဖြစ်ပါတယ်.
.ကလေးတွေ အနာဂတ် အတွက် ပြုစုပျိုးထောင်ဘို့ အားမွေးရင်း ဒီနေ့တော့ ကျမ ကလေး (၃) ယောက်တောင် မွေးစားပစ်လိုက်ပါပြီ ရှင်..”ဆိုတဲ့စာလေးကိုရေးသားဝေမျှခဲ့ရာ လေးစားမိလွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
source-Khine Hnin Wai fb
တစ္ရက္ထဲမွာပဲ မိဘမဲ့ ကေလးငယ္ေလး (၃) ေယာက္ကို ေမြးစားခဲ့တဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ
မင္းသမီးေခ်ာေလး ခိုင္ႏွင္းေဝကေတာ့အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြနဲ႕အတူတူ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကိုစိတ္ေရာကိုယ္ပါနစ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လာတာ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာေနၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ခိုင္ႏွင္းေဝပရဟိတအသင္းနဲ႕ ခိုင္ႏွင္းေဝရင္ေသြးေလးမ်ားေဂဟာကို တည္ေထာင္ဦးစီးေနတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝက အလုပ္ေတြမ်ားစြာကို ဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနရသူပီပီ ဝန္ေတြမ်ားစြာကို ထမ္းေဆာင္ထားရသူတစ္ေယာက္ ဆိုလည္း မမွားပါဘူး။
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္စြန႔္ပစ္ခံရတဲ့ ကေလးေလးေတြကို ၾကင္နာတဲ့ႏွလုံးသားအျပည့္နဲ႕ ေမြးစားကယ္ဆယ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီးအခု လည္း တစ္ရက္ထဲမွာပဲ ကေလးငယ္ေလး (၃) ေယာက္ကို ေမြးစားေစာင့္ေရွာက္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းခုလိုပုံေလးေတြနဲ႕တကြေဖာ္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။” ဒီေန႕ တရက္ထဲ သားသမီး (၃) ေယာက္ ေမြးစားျဖစ္ပါတယ္ရွင္…..သားေလး (၂) ေယာက္ နဲ႕ သမီးေလး (၁) ေယာက္ပါ…လူမ်ိဳးမေ႐ြး၊ ဘာသာမေ႐ြး ဆိုးသည္ ေကာင္းသည္ မေ႐ြးပဲ လူ႕အသက္ တေခ်ာင္းကို တန္ဘိုးထား၍ ကယ္တင္ျခင္းမွာ က်မ ခံယူခ်က္ျဖစ္ပါတယ္.
.ကေလးေတြ အနာဂတ္ အတြက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဘို႔ အားေမြးရင္း ဒီေန႕ေတာ့ က်မ ကေလး (၃) ေယာက္ေတာင္ ေမြးစားပစ္လိုက္ပါၿပီ ရွင္..”ဆိုတဲ့စာေလးကိုေရးသားေဝမွ်ခဲ့ရာ ေလးစားမိလြန္းတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။
ဂုဏ်ယူစရာ‌လေးစားစရာကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီး ပြန်လာရင် ပိုချစ်ကြရမယ်
အတင်းပေးသူကြောင့် ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တို့ ဇနီးမောင်နှံကို ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည့် ရုပ်သံ